कसरी फैलियो हल्ला ? कुलमान घिसिङको कार्यकाल थप मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव नै पुगेको थिएन – Khabar PatrikaNp
कसरी फैलियो हल्ला ? कुलमान घिसिङको कार्यकाल थप मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव नै पुगेको थिएन
August 25, 2020 94
Prevकुलमान घिसिङको कार्यकाल दोहोरियो ३ करोड नेपालीमा फेरि खुशीयाली !
Nextहलेसीको चौतर्फी विकास गरिँदै छ विश्व प्रसिद्ध त्रिधार्मिकस्थल (खोटाङको हलेसीको दरशन गरौ )
तीजको रमाइलो गरे १ हजार, माक्स नलगाए १ सय जरिवाना !
नेपालले नाप्यो सगरमाथाको उचाइ, घोषणा गर्न चीनसँग समन्वय हुँदै…
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (28204)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (24611)